Jam | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Esi esi nri tangerine jam: nzọụkwụ site nzọụkwụ nzọụkwụ na foto
Ọ bụghị ihe nzuzo na tankị na-ejikarị ọkụ ọhụrụ. Ma ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ na-amụta ka esi nri ndị citrus dị otú ahụ na-esi nri. Ọ na-apụta na ọ bụghị nanị na ọ tọrọ ụtọ ma na-esi ísì, ma ọ bara uru maka ụmụaka na ndị okenye. N'ụzọ na-akpali mmasị, maka ịme jam, ị nwere ike iji ọ bụghị naanị anụ nke mkpụrụ osisi n'onwe ya, kamakwa ya.
Feijoa jam: esi esi nri, ntụziaka, uru
Exotic feijoa berry adịbeghị anya na-apụta na shelves nke ụlọ ahịa anyị. O wee pụta na mkpụrụ osisi a tọrọ ụtọ ọ bụghị naanị ọhụrụ, kamakwa dị ka jam dị nro na nke na-esi ísì ụtọ, nke na-ewetakwa ahụ anyị nnukwu uru. Ka anyị chọpụta uru uru ngwaahịa a dị na otu kachasị mma iji esi nri ya.
Esi esi nri zucchini na lemon maka oyi
Blanks maka oyi emeela ka ọ bụrụ ihe dị mkpa, mana ole na ole nna nwanyị dị njikere ịjụ ha. A sị ka e kwuwe, nri n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enyekarị aka icho tebụl ma ọ bụ ịzigharị nri ezinụlọ. Mụta otú e si esi jam jamini zucchini tinye ya na mgbakwunye nke lemon - ndị nwere mmasị na ndị ị hụrụ n'anya.
Otu esi eme ka jam si zucchini na oroma maka oyi n'oge obibi
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara na nke mbụ ndị Indian oge ochie, bụ ndị bi na mba Mexico oge a, malitere iri zucchini maka oge mbụ. Taa, ihe oriri a na-ewu ewu bụ jamini zucchini, nke a na-agbakwụnye na mmanụma ma ọ bụ lemon. Ngwurugwu Zucchini dị mfe iji mgbagwoju anya na-agwakọta ya.
Oranges jam na bee na ulo
Mmiri jam na-aghọwanye ewu ewu kwa afọ. Ozugbo e weere ya dị ka ihe dị egwu, ma ugbu a, ọ banyeghị nri anyị n'enweghị ihe ọ bụla na mgbakwunye na ụdị nri a. Na kpamkpam ọ bụghị n'efu. Ihe a na-egbukepụ egbuke egbuke ma dị egwu ka ọ dị mma iji nri Na bee ga-eme ka ọ bụrụ nke jupụtara na vitamin na mineral bara uru.